Buddhism & Science | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Category Archives: Buddhism & Science
Dr Chit Nge’s Writings about Buddhism and Science
Posted on May 15, 2016 by chitnge
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း (၁၅) ဗုဒ္ဓဘာသာကအတွင်းလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာက အတွင်းလိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားရှာဖွေတဲ့ နေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက အတွင်းလိုက်ပါ။ အတွင်းလိုက်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ ခေါ်တဲ့ ပပဉ္စတရားတွေကို ကုန်အောင် သတ်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာမှာ ရှိနေတဲ့ လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မြတ်စွာဘုရား အဆိုအဆုံးအမအတိုင်း ပယ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒီတော့ အတွင်းလိုက်ပေါ့ — အပြင်လိုက် မဟုတ်ဘူး။ သိပ္ပံကတော့ အပြင်လိုက်ပဲ အပြင်မှာရှိနေတဲ့ စကြ၀ဋ္ဌာ Tags: Buddhism and … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on May 14, 2016 by chitnge
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း (၁၄) မသေချာခြင်း သိပ္ပံရဲ့ ဥပဒေသတစ်ခုမှာ မသေချာခြင်းနိယာမဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တော်တော်များများလည်း သိရှိလက်ခံထားကြတာပါ။ (Principle of Indeterminacy) လို့ သူတို့သုံးကြတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင် ဟိုက်ဇင်ဘတ်က ဖော်ခဲ့တာပါ။ မသေချာခြင်းဆိုတာ အသေးစိပ်မသေချာခြင်းကို ပြောတာပါ။ တော်အသင့်တော့ Tags: Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သိပ္ပံ
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on February 29, 2016 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သိပ္ပံနည်းမကျတဲ့ခံယူချက် နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်အဆုံးပါပဲ။ အဆုံးရောက်တော့ ဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်၊ သိပ္ပံက အဆုံးမရှိချင်ဘူး။ သိပ္ပံက ဆုံးသွားမှာကို စိုးတယ်။ သူတို့ခံယူထားက — “—- it is better to travel hopefully than to arrive..” “—- we reached the end of the line, the human spirit would shrivel and … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, သိပ္ပံ, သူတော်ကောင်း	| Leaveacomment
Posted on February 10, 2016 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင်စတီဖင်ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျူး Stephen Hawking နှင့် Sue တို့သည် 1992 ခုနှစ်က အင်တာဗျူးခဲ့ဖူးသည်။ ယခု (၂၃)နှစ် အကြာ ၄င်းတို့သည် ဒုတိယအကြိမ် အင်တာဗျူးကြသည်။ ပထမအကြိမ် အင်တာဗျူးတုန်းကလည်း အောင်မြင်သည်။ သို့သော် ယခုလောက် မညက်ညောဟု သုံးသပ်လျှင် သုံးသပ်နိုင်သည်။ ပထမအကြိမ်က ထောင့်တတောင့်တောင့်များ ရှိသည်၊ မညက်ညောချေ – ယခုတစ်ခါ ညက်ညောသည်။ ပထမအကြိမ်တုန်းက Sue: ဆရာကြီးအဖေက ပညာတတ်ကြီးပဲ သချာင်္တွေဘာတွေ ဆရာ့ကို သင်မပေးဘူးလား ဟုမေးသောအခါ။ Hawking: သင်ပေးပါတယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Black Holes, Buddhism and Science, စတီဖင်ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Approaching Nirvana (7)
Posted on April 19, 2015 by chitnge
Approaching Nirvana (7) There are two kinds of methods for searching reality. One is Scientific method; the other is Buddhistic method. As you all know Scientific method is to search for reality by using apparatus and instruments. On the contrary, … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism, English Posts, Magga Nyanna, Science, Vipassana	| Leaveacomment
Posted on March 22, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ သမိုင်းတွင်ဖြစ်တန်ရာချေ အများအပြား ရှိခဲ့သည်။ ဟော့ကင်းသည် သမိုင်း၏ ဖြစ်တန်ချေ အများအပြားရှိပုံကို တင်ပြခဲ့ဖူးသည်။ သူသည် အိုင်းစတိုင်းကို ဝေဖန်ရာ၌ ထိုအချက်အလက်ကို ထည့်တွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သူ၏ (Einstein’s Dream) စာစုတွင် (Einstein spent the later years of his life looking for suchatheory. He did not find one because he … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Posted on February 13, 2014 by chitnge
အနာဂါတ်သည် မသေချာပါ (Future is Uncertain) နိုဗယ်ဆုရှင် ဟိုင်ဇင်ဘတ်က ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ (Future is Uncertain) လို့ သိပ္ပံ တိမ်းညွှတ်တဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ (The Principle of Indeterminacy) ပါပဲ။ မဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့ ဥပဒေသပါ။ အရာရာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် လေ့လာတဲ့အခါ လေ့လာတဲ့ အရာက အလေ့လာခံ သဘာဝကို သက်ရောက် ရွေ့လျှားစေလို့ အရာရာကို အသေးစိပ် မသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ-အမှုန်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့တည်နေရာကို … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts	| Comments Off on အနာဂါတ်သည် မသေချာပါ
Posted on February 12, 2014 by chitnge
ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ပညာနှင့် ၀ိပဿနာနည်းပညာ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ပညာ၌ ရုပ်ကို ရုပ်ဖြင့် တိုင်း၍ မရနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းဥပဒေကို သိပ္ပံပညာရှင် နိုဗယ်ဆုရ ဟိုင်ဇင်ဘတ်က ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုအား ရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုနှင့် တိုင်းသောအခါ အတိုင်းခံရသော ရုပ်ဝတ္ထုသည် မူလအခြေအနေမရှိဘဲ ရွေ့လျှားသွားတတ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အတိုင်းခံရသော ရုပ်ဝတ္ထုသည် တိုင်းသော ရုပ်ဝတ္ထုထက် ပို၍ မကြမ်းတမ်း နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ကို ရုပ်ဖြင့် တိုင်း၍ မရချေ။ ၀ိပဿနာ၌ စိတ်ကို စိတ်နှင့် ရှု၍ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism and Science, Myanmar Posts	| Leaveacomment
Posted on February 11, 2014 by chitnge
သိပ္ပံနှင့် ဒဿနပညာ သိပ္ပံသည် အမျိုးမျိုးသော ခရီးကြမ်းများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဖြတ်သန်း အောင်မြင်လာသည်နှင့်အမျှ သိပ္ပံဒဿနပညာရှင်များက သိပ္ပံ၏ တွေ့ရှိချက်များအား ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ကြရသည်။ ယင်းကား သိပ္ပံနှင့် ဒဿနပညာရပ်တို့၏ အပြန်အလှန် သမိုင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံသည် အဏုမြူခေတ်မှ နျူးကလီးယားခေတ်သို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က အဏုမြူသည် နောက်ဆုံးအခြေခံတရား (The Most Fundamental Particle) ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အချိန်နဲ့ အတူတူ ဆက်လက်လေ့လာသောအခါ အဏုမြူကို ခွဲစိတ်လျှက် နျူထရွန်နှင့် ပရိုတွန်တို့အား … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာ၊ ဟော့ကင်း၊ ဘလက်ဟိုး(လ်)နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
သိပ္ပံပညာ၊ ဟော့ကင်း၊ ဘလက်ဟိုး(လ်)နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သိပ္ပံပညာသည် လက်တွေ့ကို အခြေခံ၍ တိုးတက်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့ကို အခြေခံ၍ တိုးတက်သကဲ့သို့ လက်တွေ့ ပြသနိုင်ခြေလည်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ကို ယုံကြည်ရဲသော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း၌ သိပ္ပံသည်လည်းကောင်း၊ သိပ္ပံနည်းပညာသည်လည်းကောင်း လွန်စွာ ထွန်းကား တိုးတက်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတရားရေးဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရှင် ဟော့ကင်းသည် စကြ၀ဠာ၏ အရင်းအမြစ်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် တွင်းမဲကြီးများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ တွင်းမဲကြီးများအား ပုံစံအသစ်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ရန် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on November 13, 2013 by chitnge
နိဗ္ဗာန်၊ ဘလက်ဟိုး(လ်)နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့က နိဗ္ဗာန်နှင့် ဘလက်ဟိုး(လ်)ကို ဆက်နွှယ်လိုကြသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် ကာလ၊ ဌာနမှ လွတ်မြောက်သည်။ ဘလက်ဟိုး(လ်)သည် သူ၏ စွဲစုပ်ခြင်းကို ခံရသော အရာရာအား၊ ကာလမှ လွတ်မြောက် စေသည်။ (The End of Time) ဟု သုံးနှုန်းကြသည်။ ထိုအခါ နိဗ္ဗာန်နှင့် ဘလက်ဟိုး(လ်)ကို မည်ကဲ့သို့ နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်နည်းဟူ၍ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အမှန်မှာ တစ်ခြားစီဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ – ရုပ်နာမ်၌ ကိလေသာသတ်၍ စင်ကြယ်ပြီးတော့မှ သတ်နိုင်သော မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်က … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment